SEO Buddy: ny lisitry ny lisitra SEO anao sy ny fitarihanao hampitomboana ny fahitana eo amin'ny sehatry ny organika | Martech Zone
The Lisitry ny lisitra SEO avy amin'i SEO Buddy is ny sori-dalananao amin'ny hetsika SEO rehetra manan-danja mila mandray ianao hanatsarana ny tranonkalanao ary hahazoana fifamoivoizana biolojika bebe kokoa. Fonosana feno ity, tsy toy ny zavatra hitako an-tserasera, manampy amin'ny fandraharahana antonony manampy azy ireo hanatsara hatrany ny tranonkalany ary hampitombo ny fahitan'izy ireo amin'ny fikarohana.
Anisan'izany ny lisitra SEO
Google Sheet amin'ny lisitra 102-Point SEO
Ny fampiharana lisitry ny lisitra SEO 102-Point
Fomba fiasa momba ny tetiandro mandritra ny 52 herinandro (PDF)
Lisitry ny fizarana atiny 50-teboka (Google Sheet)
Fomba fiasa mahazatra (SOP) mihoatra ny 40 ho anao harahinao.
Raha vaovao amin'ny SEO ianao ary sahirana, ny Lisitry ny SEO dia hanampy anao hahatakatra ny sary lehibe kokoa momba ny zavatra tokony hataonao hanatsarana sy hanomezana toerana ny toerana iray. Miaraka amin'ny rindranasa sy takelaka dia ho azonao atao ny manara-maso izay anananao nefa tsy vitanao mba tsy hahadinoanao tetika manan-danja.
Tsy lisitry ny teboka bala fotsiny io. Ny lisitra fanamarinana dia miaraka amin'ny antontan-taratasy amin'ny antsipiriany, mba hahalalanao tsara ny fomba hanatanterahana ny dingana tsirairay.
Tsy fividianana indray mandeha ihany koa ity! SEO dia mivoatra tsy tapaka ka rehefa mividy ilay Lisitry ny SEO, hahazo ianao fidirana mandritra ny androm-piainana, anisan'izany ny fanavaozana rehetra ho avy maimaim-poana.
Raha matotra amin'ny SEO ianao dia loharano lehibe ity. Ny tiako ato dia ny mazava azonao. Toy ny manandrana manao piozila ary mahita ny sary voalohany. Fantatrao izay tokony hatao.
Ireo faritra kendrena ny lisitra SEO
Rehefa nivoatra ny motera fikarohana, dia misy faritra kendrena samihafa izay tsy maintsy ifantohanao raha manantena ny hampiasa tanteraka ny fifamoivoizana organika ho an'ny tranokalanao na ny fivarotanao ianao:
Foundation - Ahoana ny fomba fananganana analytics, fanarahana ny teny lakile ary ny fandrefesana ireo metika ao amin'ny Google Search Console.
User Experience - Miahy ny traikefa ananan'ny mpampiasa motera fikarohana i Google rehefa tonga eo amin'ny tranokalanao izy ireo, noho izany dia mila manatsara izany traikefa izany ianao.
Content - Rehefa mamorona votoaty miavaka ianao dia hizara izany ny olona, ​​ireo tranonkala manana kalitao no hampifandraisina aminy, ary homen'ny Google laharana anao amin'izany.
Performance - Ianaro ny fomba fanafainganana haingana ny tranokalanao mba hampidirana azy haingana. Google dia tia tranonkala haingana.
SEO eo amin'ny pejy - Ny pejy rehetra amin'ny tranokalanao dia tokony ho mora ho an'ny motera fikarohana handady mba hanondro araka ny tokony ho izy ary azo ampiasaina ho an'ireo mpitsidika hitety azy.
SEO tsy misy pejy - Mamorona fahatsiarovan-tena ho an'ny tranonkalanao ary manangona rohy lafo vidy amin'ny alàlan'ny fanentanana sy media sosialy hitondrana ny fahefanao.
SEO ara-teknika - Sorohy ny fandrika mahazatra izay manakana ny motera fikarohana tsy hahita sy hanondro tsara ny tranokalanao.
SEO eo an-toerana - Araraoty ny lisitry ny eo an-toerana amin'ny motera fikarohana ary koa ny lahatahiry lehibe izay samy manamarina ny mombamomba anao sy ny toerana ahitan'ny mpampiasa anao ny motera fikarohana.
Tsy fampianarana an-tserasera ity! Ny lisitry ny lisitra SEO dia làlana sy lisitry ny fahombiazan'ny SEO miaraka amin'ny atiny rehetra ilainao hahazoana vokatra SEO tsara kokoa!
Mampiasà kaody fihenam-bidy MARTECHZONE
Raha mila 25% amin'ny vidin'ny lisitra SEO Check ianao dia ampiasao kaody MARTECHZONE rehefa manara-maso ianao! Mahazo bonus fanampiny ihany koa ianao amin'ny checkout.
Vidio ny lisitra SEO Check avy amin'i SEO Buddy
Fambara: mpiara-miasa amiko aho SEO Buddy.
Tags: code codetakelaka googleseo eo an-toeranaseo ivelan'ny toeranaeo an-toerana seofilaharan'ny fikarohana organikampampiasa motera fikarohanafikarohana traikefa an'ny mpampiasaseo sakaizalisitra fanamarihana seoseo drafitra atinylahatahiry seoseo mpitari-dalanaseo fandrindranaseo fiofananaseo teknika
Fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po: Torolàlana 9-dingana hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po